‘न्यूजिल्याण्ड उत्तम शैक्षिक गन्तव्य’ « Loktantrapost
‘न्यूजिल्याण्ड उत्तम शैक्षिक गन्तव्य’
१२ मंसिर २०७३, आईतवार १७:५७
राजकुमार कार्की, बिर्तामोड शाखा प्रमुख फास्ट ट्रयाक एजुकेशन कन्सल्टेन्सी प्रालि
फास्ट ट्रयाक एजुकेशन कन्सल्टेन्सी प्रालिले के गरिरहेको छ ?
उच्च शिक्षा आर्जन गर्न जापान जान चाहने विद्यार्थीलाई शैक्षिक परामर्श दिँदै आएको छ । प्राविधिक एवम् कम्प्यूटर कक्षा र अङ्ग्रेजी सिक्न चाहाने विद्यार्थीका लागि अवसर प्रदान गरिरहेको छ । साथै अस्ट्रेलिया, अमेरिका र न्यूजिल्याण्डका लागि पनि शैक्षिक परामर्श सेवा सुरु गरिएको छ । नयाँ कुरा के छ भने, सोमबार न्यूजिल्याण्ड गएर पढ्न चाहने विद्यार्थीलाई लक्षित गरी निःशुल्क सेमिनार हुँदै छ ।
यसभन्दा अघि पनि न्यूजिल्याण्डका लागि सेमिनार भएको थियो ?
फास्ट ट्रयाक बिर्तामोड शाखाले चाहिँ न्यूजिल्याण्ड जान चाहाने विद्यार्थीका लागि पहिलो पटक निःशुल्क शैक्षिक परामर्श गोष्ठीको आयोजना गरिएको हो । जापानसम्बन्धी सेमिनार चाहिँ ४ पटक भइसकेको छ ।
कुन क्षेत्रका विद्यार्थी धेरै छन् ?
झापाका मुख्य बजार बिर्तामोड, काँकरभिट्टा, सुरुङ्गा, धुलाबारी, चारआली, शनिअर्जुन, गरामनी आदि क्षेत्रबाट विद्यार्थी आउँछन् । त्यसैगरी, धरान, इटहरी, इलाम, पाँचथरको फिदिम आदि क्षेत्रबाट विद्यार्थी आउने गरेका छन् ।
शैक्षिक गोष्ठीमा क–कसले प्रशिक्षण– परामर्श दिनु हुन्छ ?
न्यूजिल्यान्डको एसआइटी कलेजका इन्टरनेशनल मार्केटिङ अफिसर खानिन साइकियाले परामर्श दिनु हुने छ । फास्ट ट्रयाकका प्रबन्ध निर्देशक तथा ईक्यानका कोषाध्यक्ष खड्ग ताम्लिङले परामर्श दिनु हुने छ ।
न्यूजिल्याण्डमा चाहिँ के कस्ता शैक्षिक सम्भावना रहेछन् त ?
उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि न्यूजिल्याण्ड सम्भावनायुक्त छ । जापानपछि दोस्रो गन्तव्य हुने सम्भावना छ । न्यूजिल्याण्डको एसआइटी कलेजले उत्कृष्ट विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने छ । अरु मुलुकभन्दा आर्थिक रुपमा पनि सहज छ । कम शुल्कमा राम्रो शिक्षा लिन सकिन्छ । रोजगारीसँगै दक्ष हुने अवसर न्यूजिल्याण्डले प्रदान गरेको छ । अनि, एसआइटीले न्यूजिल्याण्डका ३ वटा स्थानमा कलेज सञ्चालन गरिरहेको छ ।
जापान जाने विद्यार्थीको प्रतिक्रिया कस्तो पाउनु भएको छ ?
जापानमा पढिरहेका विद्यार्थीले धेरै उत्साहजनक प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् । अभिभावकले नै हामीलाई सहयोग गरिरहनु भएको छ । हामीले सबै विद्यार्थी जापानका उत्कृष्ठ कलेजमा पठाएका छौँ । त्यसैले विद्यार्थीबाट धेरै राम्रो सन्देश आइरहेको छ ।
कस्ता विद्यार्थीले सेमिनारमा सहभागी हुन पाउछन् ?
प्लस टु, स्नातक तह र स्नातकोत्तर तह पढेका विद्यार्थीले परामर्श गोष्ठीमा भाग लिन पाउँछन् । आइइएलटिएसमा ५ दशमलव ५ ल्याएपनि पढ्न पाउने व्यवस्था छ । र, प्लस टुमा ५५ प्रतिशत ल्याएका विद्यार्थीलाई पनि अध्ययनको अवसर छ ।